होशियार ! कुखुराकाे मासुमा देखियो कोरोना भाइरस - krishipost.com
होशियार ! कुखुराकाे मासुमा देखियो कोरोना भाइरस
काठमाडौँ , ३२ साउन ।
कुखुराको मासु’मा नै कोरो’ना भाइरस देखिएको छ । चीनले ब्राजिलबाट ल्याइएका ‘फ्रोजन चिकेन विंग्स’ मा कोरोना भाइरस ‘कोभिड १९’ देखिएको बताएको हो ।
ब्राजिलबाट सेनजेनमा आयात गरिएका खाद्य पदार्थ ‘फ्रोजन चिकेन विंग्स’ मा कोरोना देखिएको सेनजेनका अधिकारीहरुले पुष्टि गरेका हुन्। फ्रोजन चिकेन विंग्समा कोरोना देखिएसँगै सेनजेनमा फ्रोजन चिकेन विंग्स खरिद नगर्न निर्देशन दिइएको छ। यसअघि बुधबार मात्र इक्वेडरबाट ल्याइएको फ्रोजन स्रिम्प ‘झिंगेमाछा’ मा कोरोना देखिएको समेत चीनले जनाएको थियो ।
ब्राजिल हाल कोरोनाले सबैभन्दा बढी प्रभावित राष्ट्रको दोस्रो स्थानमा छ। त्यहाँ ३१ लाख ७० हजारमा कोरोना सं-क्रमण पुष्टि हुँदा १ लाखको ज्या-न गएको छ।
आलु खेती गर्ने तरिका सिक्दै किसानहरु
उत्तरी धादिङको सेर्तुङ गाविसको वडा नम्बर ७ मा गठन भएकोे सेदाचेत कृषक समुहमा आवद्ध कृषकहरुलाई आलु खेती सम्बन्धी तालिम दिइएको छ ।
कृषिजन्न उत्पादन तर्फ आकर्षित हुँदै गरेका किसानहरुलाई शनिबार आलु खेतीका लागि आवश्यक प्राविधिक तरिकाहरु सिकाइएको हो । ३३ जना कृषकहरुको सहभागीता रहेको तालिममा आलु रोप्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु, ड्याङ बनाउने तरिका, औषधी तथा भिटामिन प्रयोग गर्ने तरिका र किराबाट जोगाउनको लागी काँचो मल प्रयोग गर्न नहुने विषयमा जानकारी गराइएको छ ।
नोर्ला र एपोरोनको आर्थिक सहयोगमा फोकस नेपाल धादिङद्वारा संञ्चालित एभिसिडि कार्यक्रम अन्तर्गत गठन गरिएको सेदाचेत कृषक समुहमा आवद्ध कृषकहरुलाई तालिम दिईएको हो । तालिममा छलफल भएका विषयवस्तु माथी एभिसिडि परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक कमल श्रेष्ठ, कृषि प्राविधिक रामनाथ महतो, भेटेनरि प्राविधिक विजय तामाङले सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।
उत्तरी धादिङमा यसबर्षबाट नयाँ जातको आलु विउ वितरण गरीएको छ । आलुको विऊ धेरै पुरानो भएकोले उत्पादन पनि कम दिने र विभिन्न रोगले सताउने भएकोले गर्दा कृषकहरुले यसबर्षदेखी रेड कार्डीनल जातको बीउ रोप्न लागेका हुन् । उत्तरी धादिङमा उत्पादन भएको आलु खानाको लागि स्वादिष्ट हुने गरेको उपभोक्ताहरुले बताएका छन् । आलु खेती सम्बन्धी तालिम पाएपछी कृषकहरु खुसि भएका छन् ।